Welcome to Nexair Online Official Store! Mobile Phones, Accessories – nexair.pk
Needaquick way to enter content on your phone? The back of the phone keypad is facing up. ♀ ✅Lightweight✅Compact✅Easy to carry! Can be used asamobile phone stand
Laptop-Desktop Hardware / Software Service =================== Laptop နဲ့ပက်သက်ပြီး အပိုပစ္စည်းလည်းစုံ ၊ Technician တွေလည်း ကျွမ်းကျင်တဲ့နေရာကိုရှာနေတယ်ဆိုရင်တော့ Eastern Service Center ရှိနေပါတယ်။ Eastern Computer & Mobile Service Team မှ Quality မြင့် Spare parts များကိုအသုံးပြုပြီး Laptop များကို Keypad လဲလှယ်ပေးခြင်း Laptop LCD ပျက်ဆီးခြင်းများကို ပြုပြင်ပေးခြင်း Laptop Power မဝင်ခြင်း စသည့် Hardware ပိုင်း Error များကိုပြုပြင်ပေးလျက်ရှိပါသည်။ Quality မြင့် Laptop Adapter များနှင့် Laptop Battery များကိုလည်း တနှစ်အာမခံဖြင့် ရောင်းချပေးလျက်ရှိကြောင်း အားပေးကြသော Customer များအား အသိပေးအပ်သည်။ ️ Laptop Battery ️ Laptop Adapter ️ Laptop Keypad ️ Laptop LCD ️ ပါဝါမဝင်ခြင်း ️ Laptop Motherboard ️ Laptop DVD RW တို့ကိုပြုပြင်ပေးလျက်ရှိပါသည်။ . Laptop Keypad - 18,000Ks -------------------- အောက်ပါ Laptop များအတွက် Keypad လဲလှယ်ပေးရင် ၁၈၀၀၀ ကျပ်ဖြင့်ပြုလုပ်ပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ မပါဝင်သော Model များအတွက် ၁၈၀၀၀ ဖြင့်ရရှိမည်မဟုတ်ပဲ Model ပေါ်မူတည်ပြီး ဈေးပြောင်းပါသည်။ - DELL 4110 - DELL 3421 - Lenovo G470 - Lenovo G460 - HP G4 (Old) - HP G4 (new) - ASUS A42J - ACER 4741 .. Laptop Adapter - 15,000Ks (OEM) ----------------------- - HP 19V - 4.7A (HS) - HP 19V - 4.7A (HB) - HP 18.5V - 3.5A (HS) - HP 18.5V - 3.5A (HB) - DELL 19.5V - 3.42A - ASUS 19V - 4.74A - ASUS 19V - 3.43A - Toshiba 19V - 3.42A - ACER 19V - 4.74A - ACER 19V - 3.42A - Lenovo 20V - 4.5 (A) - Lenovo 20V - 4.5 (B) Original Adapter များအတွက်ဈေးနှုန်းပြောင်းလဲပါသည်။ .. Laptop Battery -----------------3Months Warranty (OEM) - 38,000Ks6Months Warranty (Original) - 50,000Ks 1 Year Warranty (Original) - 65,000Ks .. Laptop LCD -------------- 14'' (6 Months Warranty) - 78000Ks 15.6'' (6 Months Warranty) - 80000Ks . Service Viper No.<3 09-969773106 သို့ Keypad / ဘက်ထရီဟောင်းပုံများ ပို့၍ ရှိမရှိနှင့် ဈေးနှုန်းကိုမေးမြန်းနိုင်ပါသည်။ .. Laptop DVD RW --------------- internal DVD RW - 27500Ks . #Battery #LCD #Keypad . --------------------- Eastern ဆိုင်ခွဲများ ---------------------- Eastern (ဆိပ်ကမ်းသာ) ၊ အမှတ် ၁၂၉၊ ဆိပ်ကမ်းသာလမ်း (အောက်ဘလောက်) ၊ကျောက်တံတားမြို့နယ်။ 09 776642220 09 776642221 09-782569031 09-977921751, .. Eastern (ကျောက်မြောင်း) ၊ အမှတ်၂၆၈၊ ကျိုက္ကဆံလမ်းမကြီးပေါ် ၊ သတိပ္ပဌာန်လမ်းထောင့် ၊ တာမွေဈေးအနီး။ 09 776642223 09 776642224 .. Eastern (လှိုင်)တိုက်အမှတ်(51/B1)(အခန်း 001)၊ ရန်ကုန်အင်းစိန်လမ်းမကြီး။ ဘူတာရုံမှတ်တိုင် နှင့် သုခမှတ်တိုင်ကြား ၊ ဟိန္ဒူ ဘုရားကျောင်းမျက်စောင်းထိုး။ 09-969 773 107 , 09-778095333, 09-778096333 . Eastern Service Center --> ၁၂၉၊ ပထမထပ် ၊ ဆိပ်ကမ်းသာလမ်း(အောက်ဘလောက်)၊ ကျောက်တံတား ။ 09 969 773 106 (Viber)
☑ Interested in Travelling? ☑ Want to Learn More about Pakistan? ☑ Subscribe Now to the Best Pakistan Travel Channel for Amazing Travel Videos! Click the Button Below to Subscribe!
#CONCURSO Cada mamá es una Edición Especial ✨ Por eso tenemos un Rosé exclusivo para ellas ¿Cómo participar? 1.- Sigue la cuenta @valdiviesochile 2.- Cuéntanos qué hace que tu mamá sea única ❤ Y ya estarás participando por un exclusivo set de productos que incluye esta edición especial
Sending money abroad with your bank? There’sacheaper way – up to 10x cheaper, actually. Meet TransferWise.
"Là c'est la mort du Guide Michelin. Il se ridiculise, il se discrédite",aréagi le critique gastronomique Périco Légasse.
مركز دلتا للتدريب